lundi, 02 décembre 2019 21:48
Lozam-pifamoivoizana: Telo mianaka niharan-doza, maty ny roa
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahery vaika teo Andranonahoatra-Antsirabe ny alahady 01 desambra 2019 mitatao vovonana. Raha ny filazan’ireo nanatri-maso ny loza dia itony moto scooter itony no nifandona tamin’ny fiara mini-bus iray, izay voalaza fa samy nandeha mafy.
Hianatsimo ilay fiara, raha toa ka hianavaratra ilay scooter izay nanao taingin-telo, mpianaka avokoa izy telo lahy. Vokatry ny dona mafy nahazo dia tsy tana ny ain’ireo olon-dehibe roa rehefa tonga teny amin’ny hopitaly. Fahatapahana teo amin’ny tongony no nahazo ilay zazalahy kely iray.
lundi, 02 décembre 2019 21:33
Fanaovana « permis biométrique »: Notapahin’ny mpiara-miombon’antoka sahady ?
Miato sahady indray ny fanaovana biometrika ny fahazoan-dalana hanamory fiara sy taratasin’ny fiara. Tamin’iny herinandro iny dia hagagana ny an’ireo sekoly mampianatra fanamoriana fiarakodia rehefa tonga tao amin’ny Faritrany fa nahemotra hatrany amin’ny volana Janoary 2020 ny famoahana ny taratasy fahazoan-dalana hamily fiarakodia.
Raha ny fanazavana nomena azy ireo dia misy olana ny fitaovana ka tsy afaka na dia haka sary akory aza ireo mpianatra marobe, izay taterina avy eto Antsirabe ho any Antananarivo rehefa Talata sy Alakamisy. Efa nisy ny peta-drindrina niandry azy ireo sy nanondro ny daty tokony hiverenany arakaraky ny “rendez-vous”, efa nomena azy ireo taloha.
lundi, 02 décembre 2019 21:27
Famatsiana rano: Mitaraina ny mponin’i Faravohitra sy Ambatomaro
Rahoviana ihany ! Mahatsiaro voafitaka ny mponina eny Faravohitra, Boriborintany voalohany Antananarivo Renivohitra, raha nampanantenaina rano amin’ny paompy, taorian’ny nambaran’ny Jirama fa nisy fanamboarana ny fitaovana fitsinjarana rano teny Andohalo mba hahazoan’ny mponina eny Faravohitra sy ny manodidina rano, nefa tsy izay no mitranga. Rano mampiahiahy, hoy ny olona, no tonga eny amin’ireo sinibe manga natao vahaolana vonjimaika hamatsiana rano ny mponina.
Sasa-miandry ny rano avy eny Amoron’Ankona nampanantenaina ho avy hatramin’ny 11 septambra 2019 indray ny mponin’Ambatomaro, Boriborintany fahadimy Antananarivo Renivohitra. Efa andro maromaro no tsy misitraka rano ny ankamaroan’ny mponina amin’iny faritra iny, mahatsiaro ho atao fahirano.
lundi, 02 décembre 2019 12:21
Betafo – Vakinankaratra: Miarahaba an'i Livasoa nivoaka mpandresy i Andriamizaka Lova, kandida mpifaninana taminy
Randriatahinamalala Livasoa Moratiavina no nahazo isam-bato ambony indrindra teto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Betafo, Faritra Vakinankaratra tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna natao ny 27 novambra 2019 iny, raha ny vokatra vonjimaika navoakan’ny CENI.
Sivy ny kandida Ben’ny tanàna teto Betafo. Kandida tsimiankina « Firaisankina Betafo » ary notohanan’ny antoko Tia Tanindrazana i Livasoa, izay tanora manampahaizana sady mpandraharaha diso fantatra eto an-toerana amin’ny asa soa nataony, ka anisany nifidianan’ny olona azy ary nitondra ho amin'izao fandreseny izao.
« Miarahaba manokana an'i Livasoa N07 nivoaka mpandresy ny tenako, eny na dia tsy mbola ofisialy aza », hoy i Andriamizaka Lova, isany nifaninana tamin’i Livasoa.
« Manaiky ho resy aho », hoy ity kandidan’ny Antoko MMM eto Betafo ity, tamin’ny fanambarana natao tamin’ny tambazotra serasera sosialy facebook.
Mahatsiaro ho zanak’ikalahafa ireo Mpiraki-draharahan'ny Fitsarana miasa eny anivon’ireo Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana miisa enina eto Madagasikara, amin’ny fisahanana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna notontosaina ny alarobia 27 novambra 2019 nanerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
« Samy miasa mafy na ny mpitsara na ny mpiraki-draharaha nefa ampahafolon’ny tambinkarama omena ny mpitsara ny omena ny mpiraki-draharaha amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana kaominaly. Tsy miady hitovy amin’ny mpitsara ny mpiraki-draharaha fa farafaharatsiny mba antsasany fa tsy ampahafolony, satria tsy nampandraisina anjara tamin’ny fanapahana ny fitsinjarana ny tambinkarama ny Mpiraki-draharaha », hoy ny fanazavana azo.
Mandrahona ny hitokona ireo mpiraki-draharahan'ny Fitsarana amin’ny alakamisy 5 desambra 2019 izao, manoloana io tranga io. Nanao fampahafantarana ny hisian’io fitokonana io izy ireo tamin’ity andron’ny alatsinainy 2 desambra 2019 ity.
lundi, 02 décembre 2019 11:55
OMDA: Voafidy ho filohan`ny Filankevi-pitantanana Razafiarison Francis Alexandre
Nivory voalohany tetsy amin’ny foiben’ny Ofisy Malagasy momba ny zon’ny mpamorona na OMDA etsy Faravohitra, ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Filankevi-pitantanana ny 26 novambra 2019. Nandritra izany no nahavoafidy an-dRazafiarison Francis Alexandre, solontenan’ny ministeran’ny serasera sy kolontsaina, ho filohan`ny Filankevi-pitantanan’ny OMDA.
Telo taona no fe-potoana iasan’ny filohan`ny Filankevi-pitantanana.
Tale jeneralin’ny kolontsaina Razafiarison Francis Alexandre. Francis Turbo no anarana maha mpanakanto ahafantaran’ny olona azy, indrindra eo amin’ny tontolon’ny hatsikana.
Any Chine mandray anjara amin'ny "Séminaire de haut niveau sur les Responsables des Gouvernements locaux" ireo Governoran'ny Faritra eto Madagasikara.
Haharitra dimy ambin'ny folo andro, ny 2 ka hatramin’ny 15 desambra 2019, ity seminera ity, izay ry zareo Sinoa no miantoka ny fandaniana rehetra amin’izany.
lundi, 02 décembre 2019 11:30
Vohémar: No comment
Miisa 23 ny Governora (Faritra) raha ny voarakitry ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2020, na tsy mbola misy didim-panjakana vaovao mamaritra ho 23 ny isan’ny Faritra aza.
Samy hahazo tetibola 5 miliara Ariary isanisany ireo Governora manerana ny faritra telo amby roapolo (23), ka hatokana ho amin’ny fandaniana ho hanapamokarana ny 4 miliara Ariary ao anatin’izany ary ho amin’ny fandaniana ho fampandehanan-draharaha ny 1 miliara Ariary.
Raha ny vokatra vonjimaika navoakan’ny SRMV dia nandresy ny kandida tsimiankina Nasiry Ali tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto amin’ny Kaominina ambohivohitra Antsohihy natao ny 27 novambra 2019 teo.
Mitarika kosa ny lisitra IRD amin’ny fifidianana mpanolontsain’ny tanàna.